PressReader - Isolezwe: 2017-09-15 - Akukacaci ukuthi uR14m wangena kanjani kuMani
Akukacaci ukuthi uR14m wangena kanjani kuMani
Isolezwe - 2017-09-15 - IZINDABA - MAYIBONGWE MAQHINA
AKUCACI ukuthi wangena kanjani u-R14 million ekhadini lomfundi waseWalter Sisulu University, uSibongile Mani njengoba inkampani efakela abafundi imali ingafuni ukubekwa icala.
NgoLwesithathu, ikomiti lezemfundo ePhalamende belifuna ukuthola kabanzi ukuthi uSibongile kungani angenelwa ngu-R14 million ekhadini esikhundleni sika-R1 400 okufanele awuthole nyanga zonke.
USibongile wasebenzisa u-R800 000 kulo R14 million awuthola ngoJuni.
Inkampani efakela abafundi imali i-Intellimali iveze ukuthi isiqale uphenyo olunzulu ngalolu daba, yavula necala emaphoyiseni.
UVice Chancellor waseWalter Sisulu, uSolwazi Rob Midgley uthe akaqondi yafinyelela kanjani le mali kuSibongile futhi isidale ukuxokozela enyuvesi.
“Kunokuxokozela enyuvesi futhi kufanele lesi sigameko siphaphamise wonke umuntu. Asisoli muntu siyalweseka uphenyo ngalolu daba ngoba akekho umsebenzi wethu esimsolayo. Kufanele kuphenywe ukuze bathathelwe izinyathelo abenze lokhu,” kusho uMidgley.
Uthe iWalter Sisulu yathumela abe-Intellimali amagama abafundi abangu-14 000 nemali okufanele bayithole futhi alikho iphutha elenziwa ngabenyuvesi ngoba akekho umfundi okwakuthiwe makathole u-R14 million.
Uthe iphutha labonwa ngabasenyuvesi uma sebehlola ukuthi ngabe wonke umfundi uthole imali efanele yini.
AbeNational Student Financial Aid Scheme (Nsfas) baziqhelelanisile nalesi sigameko bethi yinyuvesi eqasha inkampani okuyiyona enikeza abafundi imali.
Isikhulu esiphezulu sakwa-Intellimali, uMnuz Michael Ansell uthe inkampani yakhe isisebenze iminyaka ngaphandle kokwenza iphutha futhi kubona kuvela ukuthi bonke abafundi abangu-3 755 bathola imali efanele. “Alikho iphutha esalenza,” kusho u-Ansell. Uveze ukuthi imishini yabo ikhombisa ukuthi uSibongile wathola u-R1 400 wanyanga zonke kodwa waveza ukuthi uSibongile wayelokhu eyibheke njalo ibhalansi yakhe ngaphambi kokuthi ayokhithiza.
“Sithole ukuthi waqala ukuthenga ukudla eSteers ngo-R56.57 waphinde wathenga okuka-R339.90, wadlulela eCheckers wathenga okuka-R20 000. Sinawo wonke amarekhodi okuthi imali isebenze kanjani ngaphambi kokuthi simise ikhadi lakhe. Wayethenga ezindaweni ezingaphandle wase-East London,” kusho u-Ansell.
Uthe uphenyo yilo oluzocacisa ukuthi imali ifinyelele kanjani kuSibongile ngoba bona babhecwa ngobende inyama bengayidlanga.